Sawirro: Maxay ka wada-hadleen musharraxiinta iyo guddiga doorashooyinka? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Sawirro: Maxay ka wada-hadleen musharraxiinta iyo guddiga doorashooyinka?
Sawirro: Maxay ka wada-hadleen musharraxiinta iyo guddiga doorashooyinka?
Golaha midowga musharraxiinta mucaaradka ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal, waxayna labada dhinac ka wada-hadleen qabsoomida arrimaha doorashooyinka dalka.
Kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa goobjoog ahaa Maxamed Xasan Maxamed (Cirro) guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo inta badan xubnaha midowga musharraxiinta, sida Xasan Sheekh Maxamuud, C/qaadir Cosoble & Xasan Cali Khayre.
Inta uu kulanka socday ayey labada dhinac ku kala warbixino qaateen, iyaga oo is dhaafsaday howlaha socda iyo kaalinta bannaan ee u baahan in la buuxiyo.
Sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen sidii ay dalka uga dhici laheyd doorasho guud oo lagu kalsoon yahay, isla-markaana u dhacda si cadaalad ah.
Musharraxiinta mucaaradka ayaa dhankooda waxa ay ballan-qaadeen inay gacan weyn ka geysan doonaan sidii ay doorashada u noqon laheyd mid u dhacda xor iyo xalaal.
Dhankiisa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo maalmihii dambe waday kulamo wada-tashi ah ayaa shaaca ka qaaday inay gudan doonaan waajibaadka loo igmaday ee ka saaran doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya sanadkan aynu ku jiro ee 2021-ka.
Si kastaba, waxaana haatan la guda-galayaa doorashada dalka, iyada oo lagu hormarayo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Arrimahan ayaa ku soo aadayo, iyada oo horay madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay heshiis rasmi ah uga gaareen doorashada.
Previous articleIkraan Tahliil ‘oo laga cabsi qabo in loo waayo’ sidii weriye Jamaal Khaashuqji oo kale
Next articleMan City Oo U Dhaqaaqaysa Xiddig U Soo Ciyaaray Liverpool. – banaadirsom
Wasiir Fiqi oo Shacabka ka dalbaday inay ka qeyb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab
Wasiir ka tirsan DF oo Jay Bahdur iyo ururo ku eedeeyey ‘shirqool la rabo in lagu dilo’
Guddiga doorashada Galmudug oo doortay guddoon
Shax Laga Sameeyay Xiddigaha Ugu Qaalisan Taariikhda Suuqa Premier League Oo...
Chelsea Oo Dajisay Qorshe Ka Caawin Kara Saxiixa Romelu Lukaku &...
Wasiir Fiqi oo Shacabka ka dalbaday inay ka qeyb qaataan la...